Mpamatsy Welded Wire Mesh Welded - Mpanamboatra Welded Wire Mesh
PVC mifono Welded Wire Mesh
PVC tariby tariby vita amin'ny vy dia karazana harato tariby. Tsy mitovy amin'ny harato vita amin'ny tariby nohosorana nohosorana nohosorana nohon'ny hafainganam-pandehan'ny tany. Ny vy vita amin'ny tariby vita amin'ny PVC dia mifono PVC na PE, vovony PP amin'ny alàlan'ny fitsaboana volo-volo, izay manana tombony amin'ny firaiketam-po mahery, fanoherana ny harafesina ary loko mamirapiratra. Fanenomana sy toetra mampiavaka azy: ny tariby vy dia mifono plastika aorian'ny fangejana herinaratra. Izy io dia manana ny mampiavaka ny fanoherana ny asidra sy alkaly, ny anti-antitra, ny tsy mihena, ny ant ...
Ny metaly tariby mifono vy dia vita amin'ny tariby vy ambany-kalitao avo lenta, izay noforonina tamin'ny famafana milina mandeha ho azy, marina ary marina ary avy eo nandraikitra ny fizotran'ny fizotran'ny galvanizing. Izy io dia novokarin'ny fenitra anglisy mahazatra. Milamina sy milamina ny velaran'ny harato, hentitra sy mitovy ny firafiny ary tsara ny fahombiazan'ny ankapobeny. Ny valin'ny tariby nandrisika dia nizara roa: electro-galvanized and hot-dip galvanized. Electro ...
Ny karazana harato azo kofehy dia: harato vy tsy misy fangarony, harato vy mainty vy, harato vy tariby vy, harato mifono plastika ary harato voarafitra. Ny harato nohosorana dia vita amin'ny tariby vy avo lenta ary ampiarahina amin'ny fantsona mekanika mandeha ho azy. Aorian'ny niforonan'ilay harato nohosorana, dia nopotsehina (electroplating na milentika mafana); ny tariby tariby nohosorana harato dia nohosoran'ny tariby vy nandrisika avo lenta amin'ny alàlan'ny welding mekanika mandeha ho azy. famokarana. Ireo vokatra voalaza etsy ambony dia milamina ...
Ny fomba lehibe ampiasaina amin'ny tariby Tecnofil dia omena etsy ambany